Minsk fizahan-tany dia mampahafantatra ny 'orientation spatial' ho an'ny mpitsidika sinoa
Home » Toerana fitsangatsanganana » Minsk fizahan-tany dia mampahafantatra ny 'orientation spatial' ho an'ny mpitsidika sinoa
Febroary 12, 2019
Famantarana arabe 55 any Minsk, renivohitr'i Belarus, no voadika amin'ny fiteny sinoa, hoy i Elena Plis, talen'ny Center Information and Tourist Center Minsk.
Ireo famantarana ireo dia miorina ao amin'ny Town Upper, Trinity Suburb, Privokzalnaya Square, Yakuba Kolasa Square, ny manodidina ny reniranon'i Nemiga, Nezavisimosti Avenue, tsenan'i Komarovsky Rynok.
“Mampiditra foto-kevitra momba ny firoboroboan'ny mpandeha an-tongotra any Minsk izahay. Ireo manam-pahaizana manokana avy amin'ny Ivotoerana misimisy momba ny fizahantany sy fizahan-tany any Minsk ary ny Fikambanan'ireo manam-pahaizana momba ny fitaterana sy mpandrefy dia nandika ny anaran'ireo toerana fizahan-tany sy arabe amin'ny fiteny sinoa. Namoaka ihany koa izahay bokikely fanaovana dokam-barotra sy fampahalalana, Visitions Minsk and Things to Do in Minsk, ”hoy i Elena Plis.
Nanamarika izy fa ny vohikalan'ny fizahantany nasionaly dia manana faritra ho an'ireo mpizahatany sinoa miaraka amin'ny fampahalalana ilaina rehetra momba ny tanàna sy ny programa tsy misy visa. Ny indostrian'ny fizahantany an'i Minsk dia natolotry ny International Mayors 'Forum momba ny fizahantany ao amin'ny Zhengzhou China sy China International Import Expo any Shanghai izay nampiantrano ny Forum Business Belarus-China koa hiady hevitra momba ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta.
Tamin'ny volana septambra 2017, nandray tsara ny vondrona turista sinoa voalamina voalohany i Belarus tamin'ny fitsidihana enina andro. Ny taona 2018 dia nambara ho Taonan'ny fizahan-tany any Belarus any Chine. "Amin'ny taona 2019, hanohy ny foto-kevitry ny firosoana amin'ny habaka isika ary hampiditra famantarana bebe kokoa amin'ny teny sinoa," hoy i Elena Plis nanampy.
Kenya dia manamafy ny fiantsonan'ny sambo fitsangantsanganana ho vita amin'ity taona ity
Westin Resort Nusa Dua Bali dia manome anarana talen'ny varotra vaovao
Vaovao momba ny dia any UK
Fitsangatsanganana an-tany: tsy misy dikany ny fametrahana US amin'ny lisitry ny Amber UK
Gloria Guevara hasolo an'i Julia Simpson, ho filoha & CEO an'ny WTTC
Ny rollouts vaksinina manerantany dia mandrisika ny fiverenan'ny dia
Nahazo medaly serivisy ho an'ny serivisy amerikana COVID-19 US World Network Network
Mampifandray indray ny seranam-piaramanidina Budapest amin'i Istanbul, Torkia i Pegasus Airlines
3 ora lasa izay